Home Wararka Guddoomiyaha G. Doorashooyinka & ku-xigeenkiisa oo maanta la dooranayo
Guddoomiyaha G. Doorashooyinka & ku-xigeenkiisa oo maanta la dooranayo
Waxaa Maanta oo sabti ah lagu wadaa in Xarunta Teendhada Afisyooni ee xeyndaabka Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ka dhacdo doorashada Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka heer Federaal iyo ku-xigeenkiisa.
Dhanka kale, Doorashadan ayaa ah mid shacabka Soomaaliyeed loogu muujinayo in ay doorasho dhacday lakiin madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa si wadajira ugu heshiiyay cida laga dhigayo gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa.
Xubnaha qaban-qaabada doorashada ayaa diiwaan-geliyay Musharaxiin dhowr ah oo u tartamaya xilka Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka heer Federaal iyo ku-xigeenkiisa, kuwaasi oo ka tirsan isla Guddiga doorashada Federaalka.
Saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegay inay dhaceen kulamo siyaasadeed oo ku aadan doorashada Maanta ka dhaceysa Xarunta Teendhada Afisyooni, waxaana la tilmaamay in loolan adeg loogu jiro xilka Guddoomiyaha Guddiga doorashada.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan inuu socdo Mooshin xilka looga qaadayo Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga doorashooyinka heer Federaal Mowliid Mataan Salaad, iyadoona la dooran doono Guddoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa.
Si kastaba Maxamed Xasan Cirro oo ahaa Guddoomiyihii Guddiga doorashada Federaalka ayaa xilka laga qaaday, kadib markii lagu eedeeyay inuu ku milman Arrimaha siyaasadda dalka.
Previous articleShil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay magalaada Muqdisho
Next articleSafiirka cusub Mareykanka ee Soomaaliya oo la kulmay qaar kamida jaaliyadda Soomaaliya
Madaxweynaha HirShabeelle Waare oo is-casilay
Ciidanka ilaalada Villa Somalia oo xabadeeyay MW Cali Mahdi